“Real Madrid kuma jirto waqtiyadeeda ugu fiican” – Halyayga reer Brazil Ronaldo oo ka hadlay xaalada Los Blancos – Gool FM
“Real Madrid kuma jirto waqtiyadeeda ugu fiican” – Halyayga reer Brazil Ronaldo oo ka hadlay xaalada Los Blancos
(Real Madrid) 13 Dis 2018. Halyayga reer Brazil Ronaldo ayaa qiray in kooxdiisii hore ee Real Madrid aysan xiligan ahayn koox fiican, wuxuuna hadalkiisan imaanayaa kadib guuldaradii xalay kasoo gaartay CSKA Moscow.
Kooxda difaacaneysa tartanka Champions League ee Real Madrid ayaa qasaaro 3-0 ah kala kulantay garoonkeeda Santiago Bernabéu dhigeeda CSKA Moscow, kulankooda ugu dambeeyay ee Group G.
Hadaba halyayga Ronaldo ayaa ka hadlay aragtidiisa kaga aadan qaabka ay Real Madrid ugu diyaar garoobi karto koobka kooxaha aduunka ee FIFA Club World Cup.
“Real Madrid kuma jirto waqtiyadeeda ugu fiican, lakiin waxa ay sameeyaan wax walba oo ay awoodaan marka ay ciyaaraan kulan muhim ah, waxaan rajeynayaa inay ku guuleysan doonaan koobka FIFA Club World Cup, markii saddexaad xiriir ah”.
“Real ayaa mar walba waa kooxda ugu cad cad ee guuleysan karta kulan kasta ay ciyaarayaan, aan iska ilaawno kulankii xalay, mar walbana waa musharax”.
“Waxay ku soo guuleysteen 4 jeer tartanka Champions League mudada 5-tii sano ee lasoo dhaafay, koox walba ee kahor timaada Real Madrid xili kasta waa dhibane”.
“Isbar-bardhiga aniga iyo Cristiano had iyo jeer waa mid adag oo aan cadaalad ahayn”.
KUBBAD mise KARATEE: Muller oo Muraadkiisa la marsiiyay...+SAWIRRO
“Waa wax laga xishoodo guuldaradii kooxda Young Boys” - Cristiano Ronaldo